မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၅ )
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း ၃)
Country of the falling stars ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်
Wanna Lose Weight? UseaRed Plate!!
Posted: 20 Jan 2012 09:51 AM PST
The sight of flowers in Spring givesasense of renewal and hope. That is the theme for the Royal Bank of Scotland's ang pow for the Year of the Water Dragon. Plum blossoms emblazoned in gold adorn the red packets. Made from thicker paper stock and measuring at 6.50″ x 3.25″, they are also sturdier and larger than regular ang pows. What I like best about these packets is the wide horizontal opening which makes it convenient to insert currency notes. This is certainly one of the better designed ang pows around for this year.
Posted: 20 Jan 2012 07:25 AM PST
Posted: 20 Jan 2012 09:55 AM PST
Petikan Ucapan ringkas YB Dato' Husam Musa Dalam Majlis Pemumuman Kota Bharu Sentral @ Tunjong
Kisah nabi Yusof Alaihissalam misalnya sebagai contoh. Lahir disebuah desa di Hebron. Kemudiannya dihijrahkan "secara paksa" ke Kota Memphis – Kota Mesir Tua. Ia menjadi turning point kehidupan yang lebih baik.
Posted: 20 Jan 2012 06:00 AM PST
An alleged gaffe from Australian Federal Opposition Leader Tony Abbott:
He is under fire after joking about the cruise liner disaster in which at least 11 people died off the Italian coast.
During an interview on Triple M radio in Adelaide earlier today, Abbott made light of the situation.
"Well, that was one boat that did get stopped, wasn't it," Abbott replied, to laughter. So it wasaline in 'response' to the Triple M guy's jokey question.
Federal Labor MP Rob Mitchell was quick to pounce on the remarks in Twitter.
Can't believe Abbott made his childish boat jokes about the Costa Concordia disaster when people died & are still missing," he tweeted.
Abbott, who is in South Australia to take part inacharity bike ride on the sidelines of the Tour Down Under, says Labor has over-reacted to his comments. But he concedes the comments were inappropriate.
"On reflection, it's probably something that should not have been the subject of light-hearted banter on morning radio," he said.
"It was. It probably shouldn't have been, but I think the Labor Party should stop over-reacting and should appreciate just the kind of way that morning radio works.
"I was askedalight-hearted question, I gavealight-hearted response..."
Hmmm.... have your heard of similar 'stupid jokes' from our own politicians?
Posted: 20 Jan 2012 05:51 AM PST
SOURCE: မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၅ ) by Aung Moe Win' FB
အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၈၈၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်ရတာအားတက်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ သူတို့ရဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို နားထောင်မိတိုင်း၊ ရင့်ကျက်အမြင်ကျယ်တဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို ခံစားမိတယ်။ ကျနော်တို့ နေထိုင်ရာ ပြည်ပကိုလှည့်ကြည့်မိတော့— လူသတ်မှုတွေ၊ ခြစားအကျင့်ပျက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့သူတွေ၊ အုပ်စုဖွဲ့ခြံခပ် လုပ်စားနေတဲ့ သူတွေ၊ အနာဂတ်ကို လောဘတကြီး ပြေးနမ်းချင်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။
"အတိတ်ဆိုတာ အရိပ်ပမာ လိုက်နေတာကို အခုထက်ထိနားမလည်နိုင်သေး သူများအတွက်"
ဒီည– ပါဂျောင် ရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ " ယုဇနပင် နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ" သီချင်းဆိုမဲ့သူမရှိဘူး
"ထွန်းအောင်ကျော်" ရဲ့ ဝိညာဉ်တွေက စန္ဒယားခလုတ်တွေပေါ်မှာ ပြေးဆော့နေတယ်
သမဂ္ဂ အလံတော်အောက်မှာ— သမဂ္ဂ အလံတော် အောက်မှာ ——- တဲ့လေ…………….
"လှဆိုင်း၊ မျိုးဝင်း၊ သံချောင်း၊ အောင်နိုင်၊ သန်းဇော်" တို့အတွက်
မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် လူမဆန်တဲ့အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲကြီးအပြီး၊ မန္တလေးစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပြောနေကျ စကားတခုရှိတယ်။ သူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေဆီက အဖြေမရမချင်း " ဟေ့ ကောင်တွေ မှန်မှန်ဖြေနော် မဖြေရင် ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) က ကောင်တွေကို ခေါ်လိုက်ရမလား" ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုပဲဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေ၊ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ဖက်ဆစ်အစိုးရက ဆရာတင်ရလောက်အောင်အထိ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ သမိုင်းဖြစ်တယ်။
အဖွဲ့ဝင် (၃၀၀) ကျော်လောက်သာ ရှိတဲ့အဖွဲ့မှာ ယုတ်မာသိမ်ဖျင်းတဲ့ အောက်တန်းစား လူတစု ဦးဆောင်ပြီး ကျောင်းသား အယောက် (၁၀၀) ကျော်ကို မတရားသဖြင့်စွပ်စွဲ ၊ တချို့ကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ဗကသ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လူမဆန်စွာနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ သမိုင်း ဆိုတာ လိမ်ညာလို့မရဘူး။ ပြင်ဆင်လို့မရဘူး။ ဖာထေးကာကွယ်လို့မရဘူး " နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရင့်ကျက်ခြင်း" ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပေမဲ့ "ယုတ်မာကြမ်းကြုတ်ခြင်း" ဆိုတာ မိမိကိုယ်တွင်းမှာ ဖွဲ့တည်နေတဲ့ သန္ဓေ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ကမ်းကုန်အောင် ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို အစိုးရဘက်ကပဲလုပ်လုပ်၊
ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကပဲ လုပ်လုပ်၊ လက်ခံလို့မရပါ။ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သွားရပါလိမ့်မယ်။
ရန်သူ့ သူလျှို ဆိုတဲ့စကားကို အုပ်စုတစုကချည်း လူပါးဝ စွပ်စွဲပြောဆိုနေမှုကို လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ ဒါဟာ ပါဂျောင် မဟုတ်ဘူး။ မာနယ်ပလော မဟုတ်ဘူး။ လက်နက်ကိုင်ထားသူချင်း အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဓါးပြ ဂိုဏ်းဆန်ဆန် အတွေးအခေါ်တွေဟာ (၂၁) ရာစုမှာ အသုံးမဝင်တာ ဒီကနေ့ စစ်အာဏာရှင်တွေတောင် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ရန်သူ့သူလျှိုဆိုတာ- စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ထဲမှာလည်းရှိနိုင်သလို၊ လူသတ်မှုကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ သံချောင်း၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း နဲ့ လှဆိုင်း တို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ခြစားအကျင့်ပျက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအကြောင်းပြပြီး ချမ်းသာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလည်း ရှိနိုင်တယ်။
လူတိုင်းမှာ အုပ်စုရှိတယ်။ လက်ယဉ်တယ် ။ ဝှက်ဖဲတွေရှိတယ် ဆိုတာ မမေ့ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ရန်သူ့ သူလျှို လို့ ပြောဆိုနေတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုလည်း၊ အခြားအဖွဲ့တွေက ပြန်လည်စစ်မေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။
ဒါပေမဲ့ မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကို နားမလည်ပဲ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ယောင်ယောင် လေသံ နဲ့ အပေါ်စီးက စွပ်စွဲနေမယ် ဆိုရင် " ကိုယ် အသုံးမကျတာ၊ ဗဟုသုတ မရှိတာ လူသိတယ်" ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမယ် လို့ သတိပေးပါရစေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနိမ့်ဆုံး သဘောတူညီမှုအဖြစ် " ဒီ လို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့၊ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်" ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြရပါလိမ့်မယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရာဇဝတ်မှုကို ရာဇဝတ်မှုကြီး အဖြစ် ဆွဲချက်တင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ မတရားမှုကို မရှုတ်ချရဲသူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တော်လှန်သူတွေအဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်သလို၊ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပါတယ် ပြောဆိုနေခြင်းဟာလည်း သံသယဖြစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ အထင်ကြီးလို့မရပါ။
၁၉၉၂ ကာလ ABSDF မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုမှာ အဓိက တာဝန်ရှိသူတွေက ရော်နယ်အောင်နိုင်( ယ္ခု-ချင်းမိုင်) ၊ မျိုးဝင်း ( သေဆုံး)၊ သံချောင်း ( ထောင်တွင်း) ၊ တို့ဖြစ်ပြီး၊ အာသံကုန်းမြင့်ပေါ်မှာ ကျောင်းသားတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်မှုမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လှဆိုင်း ( ယ္ခု- ABSDF မြောက်ပိုင်း)၊ နဲ့ သန်းဇော် တို့ အုပ်စုကို " ယောင်္ကျား ပီသပါ။ သတ္တိရှိပါ၊ လူထုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရဲပါ" လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။ ဒီလိုလူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း သမိုင်းရဲ့ ပုတ်ဟောင်နံစော်နေတဲ့ တွင်းနက်တခုမှာ ချန်ထားပစ်ခဲ့ပါမယ်။
(၂) သံချောင်း (ခ) မြင့်စိုး (၂၀၀၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့စွဲပါ ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာအရ စစ်အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ)
ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးသူလျှိုများဟု ဖမ်းဆီးရာတွင်
(၃) ဗိုလ်ကြီး မျိုးဝင်း
( တွဲဘက် အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး-တစ်-၊ ဒု -စစ်ရေးတာဝန်ခံ ) မိုးညှင်း- နန်းမား
(၇) တပ်ကြပ်ကြီး ကျော်ထင်ဦး
( မိုးညှင်း- ဗဟို ထောက်လှမ်းရေး)
(၈) ရဲဘော် မောင်ထွေး
(၉) ရဲဘော် ဖိုးနှောင်း ( ဗန်းမော်) (၁၀) ရဲဘော် သက်လင်း ( ဗန်းမော်)
( အာသံကုန်း ခေါင်းဖြတ်ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဓါးကိုင်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
လှဆိုင်း ဟာ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်မှာ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရသည်)
( မိုးညှင်း- ကချင်ဒေသ ခရိုင်မှူး)
(မိုးညှင်း ( ၇၀၁ ) တပ်ရင်းမှူး)
(၄) သက်ထွန်း ( မိုးညှင်း၊ တပ်ခွဲမှူး)
( ရွှေကူ ၊တပ်ခွဲမှူး)
(၆)သိုက်ထွန်းဦး ( ရန်ကုန်- ၅၀၁ တပ်ရင်းမှူး)
(၁) ဒုအရာခံဗိုလ် အောင်မင်း ( မိုးညှင်း) ၊ တပ်ကြပ်ကြီး ထိန်လွန် ( ဗန်းမော်)
(၃) တပ်ကြပ်ကြီး တာတီး ( မိုးညှင်း)၊
(၁) ရဲမေ ခင်ချိုဦး ( ရန်ကုန်) – အသတ်မခံရခင် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး
ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ရဲဘော်များအား ဖျော်ဖြေခဲ့ရ- သူမ၏တောင်းဆိုမှုအရ သံချောင်းမှ သေနပ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
(၂) တပ်ကြပ် ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်း( ရန်ကုန်)
( တောင်းဆိုမှုအရ သံချောင်းမှ သေနပ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့။ အသတ်မခံရခင် မျိုးဝင်းမှ မင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ဟု အငြိုးတကြီး ကြိမ်းမောင်းခဲ့)
(၆) ရဲဘော် အောင်ဖိုး ( ရန်ကုန်)
( သေဒဏ်မချခင် ခြေထောက်တွင် မိုင်းချည်ပြီး မိုင်းခွဲခြေဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရ)
အထက်ပါ (၁၅) ဦးတွင်- မခင်ချိုဦးနှင့် ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်းမှာ မိမိနှင့်အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် လုပ်အားပေးခဲ့ပြီး ABSDF ( ကချင်ပြည်နယ်) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မေလ စစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ တောင်းဆိုချက်အရ သံချောင်း မှ သေနပ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ကျန် (၁၃) ဦးမှာ ရက်စက်စွာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်းကို "မျိုးဝင်း" နှင့် "လှဆိုင်း" တို့ နှစ်ဦးမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လှဆိုင်းမှာ ယ္ခုအခါ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) တွင် ပြန်လည်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းသိရသည်။
စစ်ကြောရေးကာလတွင် အဆိပ်နှင့်လက်နက်များထုတ်မပေးနိုင်သောကြောင့် လက်ကို မိုင်းခွဲဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အဆိပ်ထုတ်မပေးနိုင်သဖြင့် ဦးခေါင်းကို ထင်းတုံးပေါ်တင်ပြီး "မျိုးဝင်း" မှ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ညတွင် တပ်သား တရုတ်ကြီး ၏ လွဲမှားသော သတင်းပေးမှုကြောင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ ဖြစ်ရပ်မှာ စိုးဝင်းသန်း မှာ နာမကျန်းဖြစ်ပြီး KIA ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူရသည်။ KIA မှ စိုးဝင်းသန်း နာမကျန်းမှု ပျောက်ကင်းပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးဆက်နှင့်အကြောင်းကြားမှု ကို သတင်းလက်ခံသော တရုတ်ကြီးမှာ " စိုးဝင်းသန်း ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု သန်းဇော်မှ တဆင့် မျိုးဝင်းထံ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ မျိုးဝင်းတို့က အုပ်စု (၂) စုခွဲကာ တွေ့သည့်နေရာ ခုတ်သတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အုပ်စု တစုမှာ တရုပ်ပြည်လမ်းကြောင်းကို သွားပြီး၊ တစုမှာ KIA ဆေးရုံသို့သွားကာ မည်သို့မည်ပုံ စိုးဝင်းသန်းပျောက်ဆုံးကြောင်း သတင်းရယူသည်။ သို့သော် စိုးဝင်းသန်း မှာ ထွက်ပြေးခြင်းမဟုတ်ပဲ ရောဂါပျောက်ကင်းသဖြင့် ABSDF ကျောင်းသားများလာခေါ်မည်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးဝင်းမှ " ငါသေဒဏ်ချခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် တခါတည်း လူသတ်ကုန်းပေါ် ခုတ်သတ်လိုက်တော့ ဟု ပြောရာ၊ ထိုအမိန့်ကို နာခံပြီး၊ သန်းဇော် တို့အုပ်စုက " စိုးဝင်းသန်း" ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ဥက္ကဋ္ဌ အောင်နိုင် နှင့် VCs မျိုးဝင်းတို့၏ သဘောအရ ၁၉.၂. ၁၉၉၂ တွင် မိဘများထံ စာရေးခေါ်သောကြောင့် မိဘများ ABSDF( မြောက်ပိုင်း) သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က မိမိတို့အား မိဘများ လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပါက အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးမည့် ကတိကို ABSDF(NB) ခေါင်းဆောင်များက ကတိဖျက်ခဲ့ပြီး မိမိတို့ အိမ်ပြန်လိုပါက ပြန်နိုင်သည်။ သို့သော် မိဘများအားတောတွင်း တွင်ခေါ်ဆောင်ထားမည် ဟု အကြပ်ကိုင်သဖြင့် မိမိတို့မှာ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သည့် မိဘများအား "အမေတို့အိမ်ပြန်ကြပါ။ မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာပင် ဆက်လက်နေထိုင်သွားမည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ မိမိ၏ မိခင်မှာ မြေပေါ်တွင် ဒူးနှစ်ဘက် စုံထောက်ပြီး လက်အုပ်မိုးကာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား ရှစ်ခိုးငိုယိုတောင်းပန်ကာ မိမိတို့ (၇) ဦးအား သနားသဖြင့် အချုပ်မှ လွှတ်ပေးရန် ပြောဆို ပန်ကြားခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့၏ အသနားခံမှု နှင့် အချုပ်မှ လွှတ်မြောက်ခဲ့သူ (၇) ဦးမှာ
(၃) ခရိုင်မှူး ရဲလင်း (ရန်ကုန်) ( စစ်အစိုးရမှ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်)
(၄) ရဲဘော် မိုးကျော်သူ (ခ) ဘိုဘို ( ရန်ကုန်) ( စစ်အစိုးရမှ ထောင်ဒစ် ၂၁ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်)
(၅) ရဲဘော် ညီညီအောင် (ခ) ဒိုဇာ ( ပဲခူး)
ABSDF (NB) ရှိ တပ်ရင်း (၇၀၁)၊ (၅၀၁) နှင့် (၄၀၁) တွင် အင်အားစုစုပေါင်း (၂၀၀) မျှသာ ကျန်တော့သည်။ မတရားဖမ်းဆီးပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းများကြောင့် ပြည်တွင်း ပံ့ပိုးမှုများ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး၊ မည်သူမှလည်း ပူးပေါင်းလာခြင်း မရှိတော့ပါ။ တပ်ရင်းများအတွက် လူအင်အားဖြည့်ဆီးရန် လိုအပ်လာသဖြင့် ထိုအချိန်ကာလ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို တို့မြှင့်ရယူလိုက်သော အောင်နိုင် ( ယ္ခု – ချင်းမိုင် တွင် သတင်းသမား လုပ်နေသူ)၊ သံချောင်းတို့၏ သဘောတူညီမှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်မှုများဖြင့်၊ ကျေးလက်တောရွာများတွင် နေထိုင်ကြသော ငယ်ရွယ်သူများကို လက်နက်ပြ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) မှ ပို့ချသော စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခိုင်းပြီး ကျောင်းသားရဲဘော် ရဲမေ များ အဖြစ် မတရားသိမ်းသွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့သည်။
Posted: 20 Jan 2012 05:46 AM PST
OMG! Going through my drafts I saw this super late entry on our short trip to Cameron Highlands in December! All the pictures has been uploaded, I dont care if you think the story is basi but I will publish it anyway! Eheheheh
As I wrote before we stayed at Strawberry Park Resort in Cameron Highlands. And the best thing to me that this hotel has got to offer isaservice all of you must take next time you get up the in the Highlands. For your info, Strawberry Park provides Guided Tour service to all their guests!It is soooo freaking convenient!!
If you have driven to Cameron Highlands before you would know how tiring it could be! Once you arrive at Brinchang for example, you would need to drive around to the many-many parks, garden and farms pulak! The roads are very narrow and when it rains they can be quite slippery. Worst thing would happen if you visit during the school holidays which mean thousands of people flocking together to enjoy the lovely cool highland weather. Driving can beanightmare at these times…
When we heard about this service Azman especially was so happy coz he didnt have to drive.Ehe! They have several routes or packages but we took the Countryside Tour. It took us to the Butterfly Farm, Boh Tea Factory, Cactus Valley etc etc. If you are traveling without children, you can try their Mossy Forest Walk or Hill Forest Walk. Sounds very interesting for nature lovers like us. Actually we could bring Miki to these Walks, coz Miki isatough boy, but at that time my morning sickness is super duper bad, takut termuntah or terpengsan tengah jalan!!
In fact I dont know how I can pullasmile in these pictures.. It was feeling so horrible! Hehehe
Below are some pictures of us at the Butterfly Farm! Me and my darling family! Check out all the butterflies on our clothes!
Our tour started at9am and we rode with other guests inavan. The driver was very friendly and knowledgeable about Cameron Highlands. Here is Miki on Daddy's lap in the van.
Miki dah tak takut butterfly!
At Butterfly Farm yang cantik…
We shared the van withaIndian family from KL andaDutch couple from Holland. They were all very nice and Miki made friends with the other kids.
Happy Miki with new friends. This was at the Honey Bee Farm.
Miki and Mummy yang separuh pengsan kepeningan at the Boh Tea Plantation.
Very fresh tea leaves
Miki just learned about carnivorous plants and when he saw some many of them at The Big Red Strawberry, he was kinda freaked out.
All of us in the van!
That night we had dinner at Strawberry Court Thai Restaurant. The restaurant is situated at Lower Ground Floor of Strawberry Park Resort.
The restaurant opens from 6pm and last order is taken at 10pm. We had steam boat and it was so yummy! At night in Cameron Highlands can be quite chilly so makan soup panas-panas is soooo good….
Miki is surprisingly so good with chopsticks! Hhehe.. He atealot that night! Good boy!
Actually Strawberry Park also hasafine dining restaurant called Tudor Grill which we will check out the next time we go there. I looked at the place and it look fineeee….
Below is Mr Ming, he is the Resort Manager andavery friendly man. He entertained us and made sure that we hadapleasant stay!
Here are more pics of us around the pretty Strawberry Park.
In case you guys are visiting Cameron during this CNY season, let me share some more info, the Jim Thomson Terrace is havingabuffet dinner on 25th and 26th January 2012 from 7pm – 9.30pm at RM52.00+ per adult and RM30.00+ per child. The food there is very yummy, you can check out my earlier entries.
If you are one of those party people, FYI the only Club in Cameron Highlands is situated in this resort! It is called Wildberry Club and opens every night. Another faq that I get everytime I write about holiday is room rates. Well here they are:-
Studio Suite from RM228.00++ onwards
Tioga Deluxe Suite from RM298.00++ onwards
Fresno2Bedroom Suite from RM378.00++ onwards
Shasta 2+2 Bedroom Apartment from RM408.00++ onwards"
-Room only & Terms & conditions apply.
For booking, you guys can call contact their KL sale office at 03 21626166 for reservations or you can book online http://www.strawberryparkresorts.com/rates/promotions.html.
Happy holidays guys! Cheers!
Posted: 20 Jan 2012 05:42 AM PST
SOURCE: မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၄ ) by Aung Moe Win's FB
အခုပြောနေတဲ့ ကိစ္စက " ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ကို ချစ်လဲ " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမဟုတ်ဘူး…ခင်ဗျားဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၊ ယုတ်မာသူတွေကို ကာကွယ်ခုခံမလား (ဒါမှမဟုတ်)ဒီမိုကရေစီ နဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုဘက်က ရပ်တည်မလား ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှု ဖြစ်တယ် ဒီ တပွဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းတန်ဘိုးကို ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်ပွဲကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေက " သူတို့ ကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်ဟာ အစိုးရသူလျှိုတွေဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေ ရှိပါတယ်" လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
တကယ်တော့သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားဆိုတာ "မြောက်ပိုင်းစစ်ကြောရေး ခွေ" လို့ လူသိများတဲ့ ဗွီဒီယို တိတ်ခွေလေးတခုထင်ပါရဲ့။ အဲ့ဒီ တိတ်ခွေလေး ထဲမှာ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရသူတွေရဲ့ ဖြောင့်ချက်တွေကို တခုတ်တရ ရိုက်ကူးထားတယ်။ သူတို့ကသာ အဲ့ဒီတိတ်ခွေလေးကို ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားအဖြစ်ယုံကြည်ပြီး ရည်ညွှန်းနေတာ။ ကျနော်က တော့ အဲ့ဒီတိတ်ခွေဟာ ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပြန်ပတ်တဲ့ သက်သေ ( သို့မဟုတ်) ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကိုယ့်ဘာသာပြန်ညှစ်မဲ့ ကြိုးကွင်းလို့ ပဲ မြင်မိတယ်။ အဲ့ဒီ တိတ်ခွေလေးကို သေသေချာချာ ကြည့်ခဲ့မိဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတိတ်ခွေလေးကို ကြည့်ပြီး၊ "စစ်ကြောရေးကို ဦးဆောင်သူတွေက လဲကွာ ဒီလောက်တောင် ညံ့ရသလား၊ ဒီလောက်တောင် ဗဟုသုတ နည်းလှချည်းလား" လို့ တွေးနေမိတယ်။ တကယ်တော့ စစ်ကြောရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေဟာ မန္တလေးလှုပ်ရှားမှု ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပုံမရပါဘူး။ သတ္တိရှိကြမယ်ဆိုရင်- အဲ့ဒီ တိတ်ခွေလေးကို ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ပေးပြီး ပြည်သူအားလုံးကို ပြပေးပါလား။ မန္တလေးကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ အထူးလက်ဆောင်တခုဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ရီကြရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သဲလွန်စတခုပေးပြီး အတိတ်ကို နည်းနည်းနိုးဆွထားချင်တယ်။ မန္တလေးကျောင်းသားတွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး (၁)၊ ထောက်လှမ်းရေး (၁၆) ၊ ဗိုလ်ကြီး မြင့်ဦး နဲ့ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး ဗျူရို ဆိုတာတွေ ပါမယ်ဗျာ။ သူတို့ဘယ်လို လုပ်ထားသလဲ။ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကျောင်းသားအများအပြားမှ…..ဦးဆောင်တာဝန်ယူနေသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ရဲဘော်ရဲမေများအကြား ကွာဟမှု့များ၊ မျိုးဝင်း၏ တဘက်စွန်းရောက်သောစိတ်ဓါတ်များ၊ မျိုးဝင်း ၏ ဒေသစွဲ တယူသန်အတွေးအမြင်များ မတရားမှု့များကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးဝင်းမှ " ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်ဘို့တောထဲလာတာ ဒီမိုကရေစီအတွက် လာတာ ဖြစ်တယ် ဒီမိုကရေစီခံစားဘို့မဟုတ်ဘူး စစ်တပ်မှာ ဒီမိုကရေစီမရှိဘူး ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူး " ဟုပြောဆိုပြီး တင်ပြမှု့များနှင့် မေးခွန်းများကိုမေးကြားခြင်းကို ဖြေကြားခြင်းမရှိပဲ ပယ်ချခဲ့သည်။ ညှိနှိုင်းမှု့မရှိပဲ..တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ မကျေလည်မှု့များပိုမိုပြင်းထံခဲ့သည်။
လွှမ်းမိုးအား ဖမ်းဆီးပြီး ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် စစ်ကြောရေးဝင်နေစဉ်ကာလအတွင်း မျိုးဝင်းမှ ရဲဘော်တဦးအား စေလွှတ်ပြီး မိမိအား စစ်ကြောရေးနေရာသို့ လာရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ မိမိမှာ ထိုအချိန်က လွှမ်းမိုး၏ ဦးစီးရုံးတွင် တာဝန်ယူနေခဲ့သူဖြစ်သည်။ လွှမ်းမိုးအား စစ်ကြောနေသောအခန်းထဲတွင် လွှမ်းမိုး၏ ရှေ့တွင်ပင် မျိုးဝင်းက မိမိ ၏ နားထင်ကို သေနတ်ဖြင့် တေ့ပြီး " လွှမ်းမိုး က မင်းကို ဘာတွေခိုင်းလဲ" ဟု မေးမြန်းခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်မှာ ထိုအချိန်က မိမိအား ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုအဖြစ် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း နောင်မှ သိခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ကံကောင်းစွာဖြင့် သံချောင်းမှ " မငယ် မင်းပြန်တော့" ဟု အမိန့်ပေးသဖြင့် အဆောင်သို့ပြန်ခဲ့သော်လည်း ဘာကြောင့် မိမိ ဦးခေါင်းအား သေနတ် ဖြင့်ချိန်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ရခြင်းကို စဉ်းစားမိသည်။
မျိုးဝင်းနှင့် သံချောင်းတို့မှ လွှမ်းမိုးအား "ထောက်လှမ်းရေးသူလျှိုမဟုတ်လား" ဟု ကျယ်လောင်စွာ ဒေါသတကြီး မေးသည်။ လွှမ်းမိုးမှ " ကျနော် မဆလ မဖြစ်ပါရစေနဲ့ ဗကပ ( ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ပဲ ဖြစ်ပါရစေဗျာ" ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ သံချောင်းမှ လွှမ်းမိုးအား သေနတ်ဖြင့် ချိန်ပြီး တန်းစီနေသော မိမိတို့ ကျောင်းသားရဲဘော် ရဲမေများ ရှေ့တွင် သွေးအေးစွာ ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ လွှမ်းမိုး၏ အသက်ကင်းမဲ့သော ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအား တိရ စ္ဆာန်တကောင်ကဲ့သို့ကန်ချပြီး မြေဖို့ကာ လူသတ်ပွဲကိုကြည့်နေခဲ့ရသော မိမိတို့အား၊ ထိုမြေပုံပေါ်တွင် စစ်ရေးပြလျှောက်ခိုင်း ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သန်းထွန်းစိုးအား ကြိုးတုပ်လျှက် နှင့် ပင် အချုပ်ခန်းသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ဧပြီလတွင် သန်းထွန်းစိုး အား အချုပ်မှ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
လွှမ်းမိုးအား သတ်ဖြတ်ပြီး မကြာမီ၊ စစ်သင်တန်းအမှတ် (၅) သင်တန်းဆင်းခဲ့သူ ရန်ကုန်မှ "ကိုအောင်ကျော်" ဆိုသူကိုလည်း မသင်္ကာ မှု နှင့် မျိုးဝင်းနှင့် သံချောင်းမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စစ်ကြောရေးမှာ နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ထို စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာနှင့်ပင် ကိုအောင်ကျော်မှာ KIA ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံရင်းနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ များမကြာမီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရှေ့တန်းသို့ထွက်သွားသူများ၊ ဗဟိုနောက်တန်းသို့ ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ABSDF ( မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် ( မန္တလေး)၊ အထွေအထွေအတွင်းအရေးမှူးအဖြစ် အောင်နိုင်( မန္တလေး) နှင့် စစ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ် သံချောင်းတို့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း မျိုးဝင်းမှာ မဲမရပဲ ရှိနေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဗဟိုကော်မတီဝင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ မည်သူမျှ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းမရှိခဲ့သော မျိုးဝင်းအား ABSDF ( ကချင်) အနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတဦးအနေဖြင့် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၁) နှင့် ဒု- စစ်ရေးတာဝန်ခံရာထူးကို ပေးခဲ့သည်။
To all my relations and dear friends and friends of friends who will be celebrating the year of the Dragon, haveagreat new year. May love, health and prosperity shine upon you all.
Posted: 20 Jan 2012 05:26 AM PST
ခုခံချေပချင်သူတွေဘက်မှ ကျောင်းသားတယောက်ကနေ ဖေ့ဘွတ်မှာ မှတ်ချက်တခုပေးထား တာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။…… " တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဒီကိစ္စ ကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ လုပ်နေတယ်" ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းသိင်္ခ ရဲ့ မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော ဝတ္ထုထဲက စကားလို၊ " အိုင်ပီ အောင်သင်းရေ- ဒီ ကွင်းဆက် က စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ၊ ဇာတ်လမ်းကတော့ အထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်လာပြီဗျို့" လို့ ပြောရမလို ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာလည်း " အဲ့ဒီ တာဝန်ရှိသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဘဝမှာ တခါတလေလောက်တော့ ပြန်ပြီး အမဲလိုက်ကြည့်ချင်စိတ်က ပေါ်နေတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတခုပြောပြမယ်ဗျာ။
ကဲ- ဟော့ဒီ စာရင်းတွေကရော၊ အစိုးရထောက်လှမ်းရေးဆီက ရတယ်လို့ ပြောချင်ပါသေးလား။
ခံခဲ့ရခဲ့သူတွေက ဘယ်မှာ မေ့နိုင်မှာလဲ။ လူတိုင်းမှာ ဝှက်ဖဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့လိုတယ်။
"Kes kemalangan masih disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987," katanya. -SH
"Setibanya di tempat kejadian, seorang mangsa berada dalam keadaan tersepit di bahagian tempat duduk hadapan bahagian kiri bas.
"Manakala semua penumpang lain bersama pemandu sudah keluar dari bas terbabit, " katanya.
"Mangsa, Mohd Rizal Zaharon, 39, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan mayatnya di bawa ke Hospital Bentong," katanya.
"Pada masa kejadian saya duduk di bahagian tepi tengah bas sebelah kanan.
"Apabila sedar saya sudah berada di hospital dan doktor mengatakan saya mengalami kecederaan di bahagian mulut," katanya.
Posted: 19 Jan 2012 09:29 AM PST
[This is an invited food session]
Oishi Frozen Yogurt At 1st Avenue, Penang – Frozen yogurt, frozen yogurt. oh, frozen yogurt, they are now like everywhere in Penang. Many new outlets popping out here and there just like the Taiwanese bubble tea and desserts trend. People nowadays enjoy desserts very much.
On the highest floor in 1st Avenue, also known as Cloud 8, located right outside the Tanjung Golden Village Cinema, there locatesavery new frozen yogurt stall withavery cute theme and name – Oishi Frozen Yogurt. Oishi Frozen Yogurt is the latest F&B outlet in 1st Avenue Mall and has just opened not more thanamonth.
I was very lucky to be invited to joinagroup of food bloggers to try out their yogurt. "Oishi" actually stands for yummy/delicious in Japanese and the pinkish setting portraysakawaii cute theme of the mini desserts cafe.
Same as other yogurt shop, the yogurt is priced by the weight of the yogurt itself plus the topping. It costs at 49sen/10gms which is much cheaper than other yogurt shop in town. What's interesting is that you can pick from more than 18 toppings for yogurt.
As for the yogurt choices, there's four variety for you to pick from which are Peach, Raspberry, Original Yogurt, andanon-yogurt type, Belgian Chocolate Ice Cream.
After trying4of the yogurts, I found out that my2favourites are the Peach and Original Yogurt. They are sweet and sour which is just nice. Raspberry was rather sour to me and Belgian Chocolate is just another chocolate ice cream.
I getachance to pick and mix the yogurts with any topping of my choice and the yogurt I took costs about RM12.25 which is rather reasonable with2yogurts and many toppings.
8th Floor, 1st Avenue Mall, Penang.
Business Hours: 10.00am-11.oopm (weekdays), 10.00am-12.00am (weekends)
Telephone: +6012-9614235 (Mr Lim Kai Yi), +6017-9381809 (Ms Cynthia)
Posted: 18 Jan 2012 01:26 AM PST
It becomes very happenings at night. I was lucky to be around Raja Uda, Butterworth area last night so I went there to check out as I heard it's very beautiful at night. Indeed it look very grand. The temple only lights up during festival like Chinese New Year and Nine Emperor Gods festival so you must not miss out right now.
Party Rock Anthem Shuffling With Traditional Lion Dance – Traditional Chinese Lion Dance is always about the lion head and two people in it, dancing with the Chinese dong dong qiang drum. It's nice, it's fun to see, it's the Chinese tradition that this dance can scared away the Chinese monster – Nian.
Posted: 17 Jan 2012 11:56 PM PST
光明新春庙会 Guang Ming Daily's Miao Hui 2012 – The press centre of Guang Ming Daily on Macalister Road turns intoahappenings carnival on last Sunday night where thousands flocked into the compound of Guang Ming Daily and Sun Yat-Sen Memorial Centre. It's the annual 'temple fair' by Guang Ming Daily which isamini carnival that stages performance, dragon dance, lion dance, andamini art-craft market in conjunction with the celebration of Chinese New Year.
This 'temple fair' or known as Miao Hui to the Chinese isasmaller scale of Chinese New Year carnival celebration by the Penang State Goverment.
The whole carnival occupied two addresses on Macalister Road, the Guang Ming Daily & Sinchew Daily Press Centre and the Sun Yat-Sen Museum. There'samini art market (Kaka Art Market) at there which sells plenty of cute and cool handicraft. All the handmade were pretty impressive and nice. I bought something at there too.
Source: မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ by Aung Moe Win's FB
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ( အထက်ဗမာပြည်) ရဲဘော်တယောက် အနေနဲ့၊ ၁၉၉၀ မန္တလေးညီလာခံကို လာရောက်တက်ခဲ့ကြတဲ့ မိုးညှင်းဒေသက ကျောင်းသား တပ်မတော် ရဲဘော်တွေကို အထူးတလည် နှုတ်ခွန်းဆက်သ ချင်သလို၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းဂုဏ်သိက္ခာကို သွေးစီးချောင်းတွေပေါ်မှာ မျှောချ၊ အဖွဲ့ဖျက်ပစ်သည်အထိ သေးသိမ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့၊ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား လူသတ်သမားများ ကိုတော့ သမိုင်းစာရင်းရှင်းတမ်းအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြပါမယ်။ ကျောင်းသား တပ်မတော်နဲ့ တော်လှန်ရေးကို အသက်စွန့်ပြီး ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ ကျဆုံးစာရင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုမခံရတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် ဆက်လက်မေးခွန်းထုတ် ကြရပါလိမ့်မယ်။ စိန်ခေါ်တောင်းဆိုကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ။ သူတပါး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကို ကျနော်တို့ဆီ လောင်မြိုက်ကူးစက်မှုတွေ မရှိစေချင်ပါဘူး။ ပြဿနာတွေကို စိတ်အေးအေးထားပြီး ဖြေရှင်းကြရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ KIA နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာတခုရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အယောက်(၉၀) ကျော်ဖမ်းထားတာကို ကြားတော့ KIA ဗိုလ်မှူးတွေက လာရောက်မေးပါတယ်။ ( ထုံးစံအားဖြင့်တော့ KIA က ကျောင်းသားတပ်မတော်အပေါ်မှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လေ့မရှိပါဘူး)၊ " ငါတို့မှာ ဘရန်ဆိုင်းလက်ထက်ကတည်းက ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေးဆိုလို့ (၅) ယောက်လောက်သာ မိဘူးပါတယ်။ မင်းတို့ဟာက များလှချည်းလား။ ဟုတ်လို့လား" ဆိုတော့ " ရော်နယ်အောင်နိုင် က အော် – ဗိုလ်မှူးတို့ကလည်း ကျားကိုက်ပါတယ် ဆိုမှ အပေါက်နဲ့လား လို့ မေးနေရသေးတယ်။ ဗိုလ်မှူးတို့က ငါးယောက်ပဲ မိတယ်ဆိုတော့ ညံ့တာပေါ့" လို့ ရယ်မောပြီးဖြေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ " All the Wars are Dirty" အင်တာဗျူးမှာ ကေအိုင်အေ အပေါ်အပြစ်တွန်းချထားတဲ့ စကားတွေကို ပြုံးမိပါတယ်။ လူသတ်တာတွေကြားတော့ ဖုံးမရဖိမရ အနံ့တွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ ကေအိုင်အေ က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဇွတ်အတင်းဝင်ရောက်လာပြီး ရပ်ခိုင်းတော့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာ စစ်ကြောရေးစခန်းတွင် သေဆုံးခဲ့သူ (၁၄) ယောက်နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်း) စစ်ကြောရေးစခန်းနှင့်အကျဉ်းထောင်မှာ တာဝန်ယူခဲ့သူမျ
Source: မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၃-) by Aung Moe Win's FB
မိတ်ဆွေတွေကို အသိပေးစရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်ဟာ ဒီလို စိတ်ထိခိုက်၊ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်မှာ တင်ပြီးမရေး ချင်ပါဘူး။ ၁၉၉၈ ထိုင်းနယ်စပ်ကိုရောက်လာကတည်းက ဒီကိစ္စတွေကို ရှင်းကြဖို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ "အရေးတော်ပုံပြီး ရင် ရှင်းမှာပါ" ဆိုတဲ့ စကားနဲ့သာ ချွေးသိပ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။ ပြည်ပမှာ ဒီလို စရိုက်တွေနဲ့သွားလို့ကတော့ အရေးတော်ပုံသက်တမ်း နောက်ထပ် နှစ်(၅၀) ကြာလည်း ပြီးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်က ဒေါက်တာနိုင်အောင်တယောက်၊ ကျနော့်ဆီကို လမ်းကြုံလို့ အလည်ဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီတုံးကလည်း သူကတဆင့်၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆီကို စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လုပ်ပါ။ ဒီကိစ္စဟာ လူတွေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာ ရှင်းရမယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားတွေကို ကျနော့ဘာသာ ကြားကနေ ပွဲစားလုပ်ပြောပေးနေတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ သူ့ကို သဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေတဲ့ အုပ်စုတွေရှိနေသလို၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ ဒီကိစ္စကြီးက ရှုပ်ထွေးလာတော့မှာမို့ပါ။ ပက်ပက်စက်စက် ခံလိုက်ရသူတွေက အများကြီးပဲလေ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြေအေးနိုင်မှာလဲ။ ပြီးတော့ ရော်နယ်အောင်နိုင်တယောက် ဘီဘီစီ မှ ဘယ်လိုအလုပ်ပြုတ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်း ကျနော်သိနေလို့ပါ။
ကျနော်က ဒီလိုတွေးတယ်။ " လူသတ်မှုကြီးက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေက ကာယကံရှင်တွေကို သေသေချာချာ တောင်းပန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက် သိက္ခာပြန်ဆယ်လို့ရမဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းလေး တခုလိုမျိုးဆို သိတ်ကောင်းမှာပဲ" လို့ စိတ်ကူးခဲ့ မိတယ်။ ဥပမာ ရဝမ်ဒါမှာ ပြန်လုပ်တဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဇာတ်လမ်းတွေလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း ကျနော့်စိတ်ကူးပါ။ ကြုံတွေခံစားခဲ့ရသူတွေရဲ့ ဆန္ဒကိုသာ ဦးစားပေးစဉ်းစားကြရမှာ မဟုတ်လား။ လူသတ်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက ဘာမှအကြောင်းမပြန်လာတဲ့အတွက် ခုလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ချရေးပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့သတင်းသမားတွေကို ချပြရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာပါ။ ဒါကလည်း ကျနော်ရွေးတဲ့ လမ်းမဟုတ်ဘူး။ ကာယကံရှင်တွေ ရွေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။
ဒုတိယကအချက်ကတော့- ကျနော့ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေဟာ ဖေ့ဘွတ်မှာတင်ရေးပြီး ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်ရင်တော့ အကြီးအကျယ် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကြီးကို တင်ပြတဲ့အခါ ကျနော်တို့သင်ကြားခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် တခုဖြစ်တဲ့ System Dynamics လို တည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ System တွေမှာ ထည့်ထားတယ်။ အဲ့ဒီ ဒီဇိုင်းကို ပုံဖေါ်လည်ပတ်ကြည့်တယ်။ အရှိန်တခုရောက်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ဇာတ်ဆောင်တွေဟာ ဟော့ဒီ System ထဲမှာ အလိုလို လိုက်ပြီးလည်ပတ်ရပါတယ်။ မလည်ပတ်ဘူးဆိုရင်၊ နောက်တဆင့်မှာ ကြိတ်ချေခံရတတ်ပါတယ်။ အခုမှ စလည်ပတ်ခါစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အရှိန်ရလာတာနဲ့အမျှ၊ ခရီးတခုဟာ မလွှဲမသွေရောက်လာမှာပါ။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီ အဖြစ်အပျက်ကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့သူတချို့ ဟာ ယနေ့ချိန်ထိ တာဝန်မဲ့စွာ တိတ်ဆိတ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေပါပဲ။
သွေးဆူပြီး ဆန္ဒစောနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း ဇာတ်လမ်းကို ဆုံးအောင်နားထောင် စေချင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ကာယကံရှင်တွေရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ တရားကို နတ်စောင့်ပါတယ်။
ကမ်းပါးပြိုတဲ့ ညအောက်ကိုမှ အနီးကပ်ရောက်သွားမိခဲ့ကြတယ်။ တဖြည်းဖြည်းမှောင်မိုက်လာတဲ့ ပါဂျောင်ရဲ့ အာသံကုန်းမြင့်ပေါ်မှာ ငါ့တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေက ရွေ့နေဆဲပဲလေ ဟိုး— အေးစက်တဲ့လေထုထဲကနေ " တက္ကသိုလ် —- ဒို့ ကျောင်း——" ဆိုတဲ့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ဆိုနေသံတွေလေ— အိမ်ပြန်ချင်လိုက်တာကွာ— "တက္ကသိုလ်နယ်မြေတနေရာဆီမှာ–" သီချင်းကို ဘယ်သူဆိုနေတာလဲ။ —–
ငါတို့လည်း သီချင်းသံတွေနဲ့အတူ လွင့်မျောနေတယ်။
"လှဆောင်" ဆိုတဲ့ကောင်က ခေါင်းပြတ်ကြီးကို ကန်ချရင်း " ကျောင်းသားဆိုတဲ့ကောင်တွေ တော်တော်ခေါင်းမာတဲ့ကောင်တွေပဲ" " တော်တော်လည်း သွေးသောက်ရဲဘော်တွေ ပီသကြပါလား" တဲ့
သန်းဇော်တို့ အုပ်စုက သူတို့လက်ထဲက ဓါးတွေကို ပစ်ချလိုက်တယ်။
" ဒီကောင်တွေကို ခုတ်ရတာ တော်တော်နဲ့ မပြတ်ဘူး"တဲ့
သူ့တို့ရဲ့အသံနက်ကြီးတွေကို့ ဝိညာဉ်တွေ နဲ့ လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
ကျော်ဝေ- ချိုကြီး- စိုးဝင်းသန်း— ထစမ်း ထစမ်း ခေါင်းပြတ်တွေကို နောက်မှ ပြန်ဆက်ကြကွာ—
သူတို့ရဲ့ လိပ်ပြာတွေကို ငါတို့ ဝိညာဉ်တွေနဲ့ ချုပ်ထားကြ—-
ဟိုမယ် —-ဟိုမယ်– "လှဆောင်" ဆိုတဲ့ကောင် ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ပြန်ပေါ်လာပြီ
သေချာနားထောင်စမ်း သေချာနားထောင်စမ်း အဲ့ဒီ လူသတ်သမားတွေရဲ့ခြေသံတွေကို ငါတို့ကြားနေဆဲပဲ
ကျော်ဝေ– မင်းဟစ်ကြွေးခဲ့တဲ့စကားတခွန်း ပြန်အော်ပြောလိုက်စမ်းကွာ
"ငါ့ကို မင်းတို့ သတ်လို့ရမယ်- ငါ့ဝိညာဉ်ကို မင်းတို့မသတ်နိုင်ပါဘူးကွာ၊ ဓမ္မစစ်ကျောင်းသား ကျော်ဝေ ကွ"
"ငါ့ကို မင်းတို့ သတ်လို့ရနိုင်မယ်- ငါ့ဝိညာဉ်ကို မင်းတို့ မသတ်နိုင်ပါဘူး" "ငါ့ကို မင်းတို့ သတ်လို့ရနိုင်မယ် ငါ့ဝိညာဉ်ကို မင်းတို့ မသတ်နိုင်ပါဘူး"
ဝိညာဉ်စီး တယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ခင်ဗျားတို့ ကြားဘူးမလားမသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ အသံထွက်ခွင့်မရရှာတဲ့ ဝိညာဉ်တွေ ကို ကျနော့အခန်းငယ်လေးထဲမှာ သိမ်းထားခဲ့တယ်။ ညတိုင်ရင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှာ သစ္စာဆိုခဲ့တယ်။ " သူတို့အတွက် ထုတ်ပြော နိုင်ခွင့်ရမဲ့ အခွင့်အရေး တခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ရပါရစေသား" လို့။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း ( အင်္ဂလိပ်) ဆောင်းပါးထဲမှာ ဆောင်းပါးရှင်တွေက မြောက်ပိုင်းလူသတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် ကို မေးခွန်းတခုမေးတော့၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်က လူသတ်မှုကို ငြင်းဆန်မှုမရှိစွာပဲ ဖြေခဲ့တယ်။
" ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်ဟာ ထောက်လှမ်းရေးအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါ သတဲ့။
"ဆောင်းပါး (၁) နဲ့ (၂) မှာ ကျနော် ခင်းထားတဲ့ လမ်းကြောင်းထဲကို တည့်တည့်ဝင်လာတာပဲ" လို့ တွေးနေမိတယ်။
၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၈) ရက်နေ့ The Nation သတင်းစာ ကို ပြန်ဖတ်သင့်တာပေါ့။ မြောက်ပိုင်း လူသတ်ပွဲ အပြီးမှာ၊ The Nation သတင်းထောက် Yindee Lertcharoenchok က အဲ့ဒီနေရာကို ရောက်သွားပြီး မြောက်ပိုင်း ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဖမ်းဆီးထားခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံအင်တာဗျူးထားမှုကို ဆောင်းပါးလုပ်ထားတာ။ ဆောင်းပါးအမည်က Burmese Rebels Defend Executions။
အဲ့ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ( အပိုဒ်-၁၃) မှာ ကျော်ကျော် ( ကချင်) နဲ့ ရော်နယ် အောင်နိုင်က အခုလို ဝန်ခံထားတယ်။
Aung Naing and Kyaw Kyaw , however, admitted that torture, particularly " beating and telephone-wire electric shocks " were applied to force confessions.
"ဝန်ခံဖို့အတွက် ရိုက်နှက်ခြင်းနဲ့ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်းလို နှိပ်စက်ညင်းပမ်းမှုတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်" တဲ့။ သူတို့လိုချင်တဲ့ အဖြေမထွက်မချင်း နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုတွေကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့ကြတာဆိုတာမို့လား။ နှိပ်စက်ခံရသူတွေက နောက်ဆုံး သူတို့ပြောတာ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်၊ စစ်ကြောရေးစခန်းက လွတ်ရင်ပြီးရော၊ "ဟုတ်တယ်" လို့ အဖြေပေးလိုက်ကြရတော့တယ်။ ဒီအချက်ကို ထောင်ကျဘူး သူတိုင်းသိပါတယ်။
တကယ်တော့ မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလတုံးက ကျနော်နဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် ဗကသ ( အထက်ဗမာပြည်) ခေါင်းဆောင် တချို့ ဟာ မန္တလေးအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါ။ မန္တလေးထောက်လှမ်းရေးအုပ်စုတွေက သူတို့ကို အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ ညတိုင်းဆွဲထုတ်ပြီး၊ ဓါတ်ပုံတွေကို ပြပြီး သေချာမှုတွေ ယူသတဲ့။
" ဒါ– ထွန်းအောင်ကျော် ဟုတ်တယ်မို့လား" " ဒီ ပုံကတော့ စိုးဝင်းသန်း မို့လား" " ဒီကောင်ကရော ဘယ်သူလဲ"
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားစဉ်ကာလမှာ "နန်းအောင်ထွေးကြည်" ဆိုတဲ့ ဘေဘီရဲမေလေးက သူနဲ့ စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်ဆိုတာ ကျနော်တို့တင်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ( ရဲမေ ၄ ယောက်ရပ်နေတဲ့ပုံ) ထဲက ညာဘက်အစွန်က ကောင်မလေး။ တကယ်တော့ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကိုလည်း ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲ၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။ သူမမျက်နှာကို မီးရဲရဲထောက်နေတဲ့ ထင်းမီးနဲ့ ထိုးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ နဂိုက ချောမောလှပခဲ့တဲ့ မျက်နှာတခုလုံး ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရခဲ့ရှာတယ်။ ပြီးတော့ နှမချင်းမစာနာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စစ်ဆေးနည်းတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသတ်ခံရတော့မယ် လို့ သူကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကို ပြောရှာတယ်။ " မငယ် ငါ့စိတ်ထဲမှာတော့ နင် လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟာ ငါ့စိတ်ထဲမှာ တကယ့်ကို ယုံကြည်နေတာ နင်လွတ်သွားလိမ့်မယ်။ နင်လွတ်သွားတဲ့ အခါကျရင် ဟော့ဒီနေရာလေးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေအားလုံးကို ပြန်ပြီးပြောပြပေးပါမယ် လို့ ဂတိပေးစမ်းပါဟာ" တဲ့။ " စိတ်ချပါအကိုကြီး ကျမပြောပြပါမယ်" တဲ့။ နန်းအောင်ထွေးကြည် က မျက်ရည်တွေကြားကနေ ဂတိပေးခဲ့တယ်။
ဘဝဆိုတာ အံသြ ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်အပါအဝင် မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ကြုံတွေ့ခံစားလာခဲ့ရသူတွေ၊ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေ အများအပြား နဲ့ ဆုံဆည်းခွင့်၊ စကားပြောဆွေးနွေးခွင့်တွေ ရလိုက်တယ်။ မငယ် (ခ) နန်းအောင်ထွေးကြည်က " ကျမလေ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို တရက်မှ မမေ့နိုင်ခဲ့ဘူး" တဲ့။ သူမက ဘယ်သူ့ကိုမှ အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ သူတယောက်တည်း အော်စီမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေပြီး ဘဝကို ရှင်သန်ခဲ့ရတယ်။ ငရဲက သယ်လာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကျနော်မြင်နေရတယ်။ ဟုတ်မှာပေါ့လေ။ ကျနော်လည်း သူတို့တတွေပြန်ပြောပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဆက်ပြီးနားမထောင်ရဲလောက်အောင်ပဲ။ ပါဂျောင်ဒေသ က အော်ဟစ်ဆူညံနေတဲ့ ဝိညာဉ်တွေ ကျနော့ရင်တခုလုံးဆီ မချိမဆန့်လူးလွန့်နေတယ်။
"နန်းအောင်ထွေးကြည်" ကို ကျနော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်။
" ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် ယူကြုံးမရဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တန်ရင် ဒီလူတွေ သူ့အရှိန်နဲ့သူသွားမှာပါ။ ခင်ဗျား မပူပါနဲ့။ တည်ငြိမ်အောင်နေပါ။ အကုသိုလ်ကံတွေကို ရောက်မလာစေနဲ့။ ဒီ လူတွေ ဝဋ်လည်အုံးမှာပါ။ ယုံစမ်းပါ" လို့။
နန်းအောင်ထွေးကြည်က ကျနော့ကို ပြောတယ်။ " ကိုအောင်မိုးဝင်း ကလည်း ထိန်လင်း အတိုင်းပဲ သံဝေဂ တရားစကားတွေ ပြောတယ်" တဲ့။
အေးလေ။ သူမရဲ့ ဘဝမှာ ရက်ရက်စက်စက်ကြုံတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန့်ပြန်ချင်တဲ့စကားလုံးတွေကို အလိုရှိမှာ အမှန်ပဲ။ ကျနော်တွေးတာက ဒီလိုပါ။ ဒါဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲ ပဲ။ လူတွေကို လပေါင်းများစွာဖမ်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းပြီးမှ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာမျိုးတွေဆိုတာ ကျနော်နေနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ တခါတလေပြတဲ့ စိတ္တဇ လူသတ်ကား ရုပ်ရှင်တွေမှာပဲ ကြည့်ဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်မများဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့သွားလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။ စံနစ်တကျပြင်ဆင်ရမယ်။ သူတို့လိုပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ တုန့်ပြန်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေယောင်ယောင် ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကို တဆင့်ခြင်းဆွဲချွတ်ပစ်ရမယ်။
တခါတလေတော့လည်း ရီစရာတော့ ကောင်းတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ သူတွေက သူတို့ကို အင်တာနက်မှာ တယောက်ယောက်က ချတိုင်း၊ နောက်ကွယ်ကနေ ကျနော်က မြှောက်ပေးတယ် လို့ ထင်ကြတယ်။ ကျနော်က ဘာလို့နောက်ကွယ်က နေရမှာလဲ။ ထိုင်းနယ်စပ်ကို ခြေချ ကတည်းက ဒီကိစ္စကို ဗြောင်မေး၊ ဗြောင်ပြော၊ ဗြောင် စိန်ခေါ်နေခဲ့တာပဲ မို့လား။ လာရင် ရှေ့တည့်တည့်က လာမှာ စိတ်ချ လို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောနေမိတယ်။ ကျနော်ကြောက်ရမဲ့အဖွဲ့ဆိုတာ တဖွဲ့မှ မရှိဘူးလေ။ ကြောက်တတ်ရင် အစောကြီးကတည်းက နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ခွေးအ လိုလို လူမျိုးတွေကို ကြောက်စရာမလိုဘူး။ ခွေးအ ဆိုတာက အုပ်စုရှိမှ အမဲလိုက်ရဲတယ်။ အပုပ်ကို စားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခွေးအ တွေ အမဲလိုက်လေ့ရှိတဲ့ နေရာဒေသဟာ သိတ်ကျဉ်းပါတယ်။
ကျနော်တို့ အမဲလိုက်မဲ့နေရာက အများကြီးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သမိုင်းဆိုတာကတော့ ရှင်းကြရအုံးမှာပါ။
လူဆိုတာ စိုက်တဲ့အတိုင်း ရိတ်သိမ်းကြရမယ်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ( KIA) ၊ မငယ် (ခ) နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ အစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကေအိုင်အေ နဲ့ မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ကျောင်းသားထုကို ရန်တိုက်ပေးထားတာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ကေအိုင်အေ ဟာ ကချင်ကျောင်းသားတွေကို အသုံးချပြီး ဗမာကျောင်းသားတွေကို သတ်တယ်– ဘာညာ ဆိုတဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို သံယောင်လိုက်ပြီး လျှောက်ပြောနေတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ တချို့ကတော့ ဖြစ်သမျှ ရာဇဝတ်မှုကို သေဆုံးသွားတဲ့ မျိုးဝင်းအပေါ်မှာ လွှဲချပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ရှောင်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားချင်ပုံရပါတယ်။ တကယ်တော့ ရှောင်ထွက်လို့မရပါဘူး။ အာသံကုန်းမြင့်မှာ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တာ မျိုးဝင်းတယောက်တည်း မဟုတ်သလို၊ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မန္တလေးကျောင်းသားတချို့ကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ပြတဲ့ အထဲမှာ ရော်နယ်အောင်နိုင်လည်းပါပါတယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုရာပြည့်ရဲ့မျက်နှာ ကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ ချွတ်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ ရော်နယ်အောင်နိုင်ပါ။ ဗမာပြည်ဆီကို ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ ကိုရာပြည့် ကတော့ မန္တလေး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်ကျရင်း ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
မျိုးဝင်း တို့ အုပ်စုက ကေအိုင်အေဟာ သူတို့နောက်က ရှိတယ်။ သူတို့ကသာ ကေအိုင်အေနဲ့ပိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဟန်ပန်တွေကို လုပ်ခဲ့ကြပုံရပါတယ်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့က သတိပေးခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ " ကျနော်တို့မှာ အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ဖြုတ်ထုတ်သတ် လုပ်ခဲ့မိလို့ ကျနော်တို့ပါတီဟာ တလျှောက်လုံးပေးဆပ်နေရတယ်။ ခင်ဗျားတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ" လို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ နားမထောင်ပါဘူး။ လူသတ်မှုတွေ နားနဲ့မဆန့်အောင် ကြားလာရတဲ့အခါ ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာပြီး အတင်းဝင်ရောက်တားဆီးပါတော့တယ်။ ကေအိုင်အေ ဟာ မျိုးဝင်းနဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကို အင်မတန်စိတ်ပျက်သွားခဲ့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို သူတို့စစ်မေးမယ် ဆိုပြီး၊ လွှဲပြောင်းယူခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင် နဲ့ ခေါင်းဆောင် သုံးယောက်က နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို စစ်ဆေးစဉ်ကာလက မှတ်တမ်းတွေ ကို ယူပြီး ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။
"သမီးရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က (——x+) ဟုတ်လား"
ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်နဲ့ ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တွေက ရီကြတယ်။
" ကဲ— ငါ့သမီး ခုချိန်က စပြီး သမီးဝန်ခံပြောဆိုနေတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာကြီးကို မေ့လိုက်တော့။
"သမီးပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း နဲ့ တန်းတူဖြစ်နေတယ်" တဲ့။ ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တသက်လုံးတိုက်လာခဲ့တဲ့ ကေအိုင်အေ က ရန်သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေ၊ သင်တန်းဆင်း နံပါတ်တွေကို အလွတ်ရတာပေါ့။ တကယ်တော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးနံပါတ်ဆိုတာတွေကလည်း မျိုးဝင်း၊ သံချောင်းနဲ့ စစ်ကြောရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေက ဇွတ်အတင်းဖန်တီးဝန်ခံခိုင်းတာ ဆိုတော့ နန်းအောင်ထွေးကြည်အနေနဲ့ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ နုတ်တိုက်ရွတ်ဝန်ခံ ထွက်ဆိုရတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်က နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ပြောတယ်။
" ငါ့သမီး- ဒီကိစ္စက ပြန်ပြီးရှင်းရမယ်။ ဒီလိုခံနေလို့မဖြစ်ဘူး။ ငါ့သမီးတို့က ခံခဲ့ရတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကို စောင့်ပါ။ ငါတို့လည်း အပစ်အခပ်ရပ်ဆဲတော့မှာဆိုတော့ —-" မကြာခင်မှာပဲ ကေအိုင်အေ နဲ့ ဗမာအစိုးရကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှု စကားပြောပွဲတွေက စတင်ခဲ့တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းက တဆင့် အော်စီ ( ——) ကို ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မိုင်ပြောသလိုပါပဲ။
"ကျမ အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ရတယ်" တဲ့။ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကလည်း အနှစ် (၂၀) လောက်ဖြစ်သွားတယ်။
(၃) ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကေအိုင်အေ ဟာ ဗမာကျောင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်လိုက်ကြပြီ ဆိုပြီး ဗမာကျောင်းသားနဲ့ ကေအိုင်အေ ကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ မျိုးဝင်းတို့အုပ်စုကို ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်က ပစားပေးထား မြှောက်ပင့်ထားပြီး ဗမာကျောင်းသားတွေကို သတ်ခဲ့တယ် ဘာညာပေါ့။
၁၉၉၂ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အဲ့ဒါပါပဲ။ မျိုးဝင်းတို့အုပ်စုရဲ့ နှိပ်စက်မှု အစစ်အမှန်တွေကို ရောထည့်ပေးလိုက်ပြီး စစ်အစိုးရက သူတို့လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့်ချီပွဲကို လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ညီလာခံက ၁၉၉၀ ၊ မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်ထဲမှာ ကျင်းပတာဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန် ဗကသ က နှစ်ဖွဲ့ကွဲ နေတယ်။ ကိုကိုကြီး ဦးဆောင်တဲ့ ဗကသ နဲ့ ကိုအောင်ထွန်း( ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သမိုင်းစာအုပ်ရေးသူ)၊ ဗသက်အောင်၊ ဖြိုးမင်းသိန်း တို့ ခေါင်းဆောင် တဲ့ (အောက်ဗမာပြည်၊ ဗကသ)၊ အခု ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်မှာ လုပ်နေတဲ့ ကိုထွန်းမြင့်အောင် ဆိုတာလည်း ဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့တဖွဲ့တည်းပဲလေ။ ၁၉၉၀ တလျှောက်၊ ရန်ကုန် ဗကသ နှစ်ဖွဲ့လုံး မန္တလေးကို လာကြရတယ်။ ကိုပြုံးချို၊ ကိုညိုထွန်း၊ ကိုကိုကြီး တို့တတွေလည်း သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။ ပြည်ပမှာရောက်နေသော မဟာ့ မဟာ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဆိုသူများ—– ကိုယ့်သမိုင်းတွေချည်း ကိုယ်ရည်သွေး အမွှန်းတင်ပြောမနေပါနဲ့။ သူများတွေရဲ့ သမိုင်းတွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကြပါအုံး။ အပြင်မှာ သမိုင်းလိမ်တာတွေ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်တာတွေများလာတယ်။ ဂိုဏ်းဂဏဖွဲ့ရန်ဖြစ်တာကလည်း များလာတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ကလည်း လေးစားမှုမရှိတော့ဘူး။ နောက်မျိုးဆက်တွေကလည်း မလေးစားတော့ဘူးလေ။ သမိုင်းနားမလည်တော့ ဗကသ ခေါင်းဆောင်က ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်၊ NGOs တွေဆီမှာ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူတွေက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဖြစ်နဲ့။ ပြည်ပမှာ အဲ့သလို မိုးကြီးချုပ်နေမဲ့အစား၊ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်ပြီးတော့ ဆယ်ယူကြစေချင်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာ မန္တလေး ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတခုရှိပါတယ်။ GTI ကျောင်းဝင်း အတွင်းကနေ ထုတ်လွှင့်တာပါ။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဆိုတာ ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပါ။ သူ့ကို ချစ်ခင်လေးစားသူ တွေက "အကိုကြီး" လို့ခေါ်ဆိုလေ့ရှိတယ်။ အရေးတော်ပုံအရှိန်မြင့်လာတယ်။ သူ့ကိုလည်း သပိတ်တပ်ပေါင်းစုထဲမှာ တွေ့လာရတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်း အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာ သွားတက်ခဲ့တယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဈာပန အခမ်းအနားတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင် ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တော်တော်များများက သူ့ကို သိကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ညီ ကိုလတ် က ကိုမောင်မောင်ဝမ်းတို့နဲ့ အတူ မကသ မှာ လုပ်တယ်။
၁၉၈၈ သြဂတ်စ် (၂၈) မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗကသ ညီလာခံဟာ တတိုင်းပြည်လုံးက ကျောင်းသားတွေကို မစုစည်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းသားတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုမဲ့ ညီလာခံတခုကိုကျင်းပကြဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဗကသ၊ မကသ ကွဲနေတော့ မန္တလေးမှာ ညီလာခံနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ တခုက- မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ အင်းဝဆောင် (၉) မှာ ကျင်းပတဲ့ ဗကသ ညီလာခံ။ နောက်တခုက ကိုမောင်မောင်ဝမ်း၊ ကိုလတ်၊ တို့ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ ရတနာဘုံမ္မိနယ်မြေ ကဉ္စနဆောင် ထဲက၊ မကသ ညီလာခံ။ ရန်ကုန် ဗကသ ကနေ တက်လာတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ကိုပြုံးချို၊ ကိုဇော်ဇော်အောင်၊ ရန်မျိုးသိမ်း တို့ဖြစ်တယ်။ ကိုညိုထွန်း ကတော့ မန္တလေးမှာ ဗကသ ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် ဘုရားကြီး၊ မြတောင်၊ မစိုးရိမ် — စတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းအစည်းအဝေးတွေမှာ ကတည်းက ကျောက်ချ ပါဝင်နေတော့တယ်။ အဲ့ဒီညီလာခံမှာ- ဗကက ( အထက်ဗမာပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ က ကိုသန့်စင် ( ဆေးတက္ကသိုလ်) နဲ့ အပြိုင် ကျောင်းသားထုထောက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်။ သူကလည်း လူချစ်လူခင်များတယ်။ ၁၉၈၉ ဗကသ ညီလာခံကို ရော်နယ်အောင်နိုင် ( အနကလ)၊ ကိုစိုးလင်း ( အနကလ) တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာ၊ MA ဒေါ်အုံး၊ ဒေါ်ကြည်ကြည် ( သခင်ဇင့် မိန်းမ) တို့လို နာမည်ကြီး မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အသီးသီးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီညီလာခံထဲမှာ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦးရဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကလည်း တရားဝင်တက်ရောက် သတင်းယူခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီတုံးက ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဘေးမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နဲ့ အကြံပေးလိုက် လုပ်နေတာ ရော်နယ်အောင်နိုင် ပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုစိုးလင်း ဆိုတာ ညီလာခံမှာ တတွဲတည်းထိုင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်တွေမဟုတ်လား။ ကဲ– ဗကသခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်လို့ ခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အခိုင်အမာဝန်ခံချက်တွေကို မန္တလေးသားတွေကို ရှင်းပြပေးသင့်တာပေါ့။ မန္တလေးသားတွေကလည်း ဒီကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်ကြမယ်ဆိုတာတော့ ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်။
စတုတ္ထပိုင်းမှာ " နန်းအောင်ထွေးကြည်" ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ကို သူမရဲ့ မူရင်းလက်ရေးနဲ့အတူ တင်ပြပေးပါမယ်။
Posted: 20 Jan 2012 04:38 AM PST
Source: ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြည် Renaissance By ခင်ငြိမ်းသစ် ဖေစ့်ဘွတ်ခ်မှ …Khin Nyein Thit's FB (မြန်မာပြည်ကို လူညွန့်တုံးအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။)
Posted: 20 Jan 2012 02:19 AM PST
According to an article in Daily Mail Online AT THIS LINK:
Posted: 20 Jan 2012 02:13 AM PST
သင်းကွဲတွေကို လူရာသွင်း။ ကျားသေကို အသက်သွင်းချင်နေကြသော ဂျာနယ်များ။" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Chawchaw Mirror ရေးသားထားတာကို ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
ကျွန်မ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးလည်း မဟုတ် သလို အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ မှလည်း မဟုတ်ပါ။ စာပေဝေဖန်ရေးသမားလည်းမဟုတ်သလို အခုတလောမှာ ဂျာနယ်တွေရောင်း ကောင်းနေလို့ စီးပွားပြိုင် မနာလိုတတ်တဲ့ သူတစ်ဦးလည်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အမှန်တရား ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားသော။မိမိ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိသော လွတ်လပ်ပြီး စစ်မှန်သောတရားမျှတမှုရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို လိုလားသူ ပြည်သူထဲမှပြည်သူတစ်ဦးပါဘဲ။
ကျွန်မ ပထမ တစ်ကြီမ်စာမှာဖေါ်ပြခဲ့သလို မဆလ ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးမှာကြီးပြင်းလာရပြီး၊ သမ၀ါယမ တန်းစီ စနစ်တွေနဲ့ ဆီတစ်ဆယ်သား။ ဆပ်ပြာတစ်ပိုင်းရဖို့ အရေး။ သမ၀ါယမဥက္ကဌ လက်မှတ် အပြေးယူ ရတဲ့ခေတ်၊ ပန်းဆိုးတန်းက ရူဘီ MART ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ကုန်တိုက် မှာ စစ်သားဂျိုင့်ထောင့် ဖြေပြတ်လက်ပြတ်သမားတွေ၊ သာမန်လူတန်းစားတွေ၊ ဓာတ်ဆီကားတွေ တန်းစီးတိုးစားသလို ။တန်းစီလို့ ရတာလေးတွေ ကုန်တိုက်အောက်မှာ ပြန်ရောင်း၊ နယ်တွေမှာဆိုကောင်စီဥက္ကဌက ဘုရင်ဘဲ။ ဒီလိုစနစ်ဆိုးကြီးမှာ လူဖြစ်ခဲ့ ရတယ်။ ၁၀၀ကျပ်တန်ငွေစက္ကူတွေ မတရားအသိမ်းခံရ၊ ၂၅ကျပ်။၇၅ကျပ် တန်တွေ မတရားအသိမ်းခံရ။ ကိုဖုန်းမော် ကျောင်းသားအရေးအခင်းက စခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုမှာ ကျွန်မ စတ္တုထနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ။ကျွန်မတို့ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်း သူ မိကောင်း ဖခင်သားသမီးတွေ အများကြီး လုံထိန်း တွေက မတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ် ။ သွေးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ အင်းယားကန်ဘောင်ကန်လမ်းကနေ အချုပ်ကား။ထောင်ကားတွေ ထဲကို အတင်းအကြတ် ပြွတ်သိတ်တင်လို့ အချုပ်ကားထဲ မှာမွမ်းကြတ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့ ကျောင်း နေဘက်တွေ ရေကြည်အိုင် လို စစ်ထောက်လှမ်းရေး နေရာတွေမှာ ခဲဆိပ်ရေတွေ သောက်။ ခေါင်းပေါ်မှာရေတစ်စက်ခြင်းချတာမျိုးတွေ။
ညအိပ်လို့ကောင်းတဲ့ နာရီပြန် ၂ ချက်တီး ကျမှအတင်းအဓမ္မနှိုး။ မဟုတ်တာကော ဟုတ်တာ ကော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးဝန်ခံခိုင်းတာတွေ။ ဒီလိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေများစွာနဲ့ တစ်ချို့ စိတ်မနှံ့ ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ (ဥပမာ။ ၁၉၈၈ မှာ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ဘဲ ရှိသေးတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ၂ က ကျောင်းသားလေး။ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းသွယ်မှာနေတဲ့ ဗိုလ်ရဲလှသား ကိုကျော်စွာ တို့လို (ကိုနေလင်း`၏ လူရှင်းသင်္ချိုင်း များ စာအုပ်ကိုဖတ်ဘူး တယ်ဆိုရင် ကိုကျော်စွာ ဟာထောင်ကျတုံးက အငယ်ဆုံး အဖြူအစိမ်းဝတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသား ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ )
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မ မိသားစုဝင်တွေ ဒီလိုမျိုး အနှိပ်စက် မခံရဘူးပါဘူး။ ထောင်ကျမခံရဘူးပါဘူး။ ( ချွင်းချက်။ ။ ၁၉၇၄ ဦးသန့်အရေးအခင်းမှာဘာနိုင်ငံရေး။အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ့ ကျွန်မဦးလေးအငယ်ဆုံး အင်းစိန်ထောင်မှာထောင် ၆ နှစ်မတရား ကျခဲ့ဘူးတာကလွဲရင်ပေါ့။ ) အဲ့ဒီ့ခေတ်က အင်းစိန်ထောင်မှုးကြီးက မစ္စတာ မက်က်နန်းဆိုတဲ့ သူလို့ အမေ ပြောပြလို့ကျွန်မ မှတ်မိခဲ့တယ်။ ဘုမသိဘမသိတဲ့သူတွေတောင် ထောင်ချပြစ်တဲ့ မဆလခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုး အရှိန်ကြောင့် မဆလ တစ်ခေတ်လုံးမှာ ကျွန်မ တို့မိသားစုဝင်တွေ အစိုးရ စနစ်ဆိုးတွေကို မကျေနပ်ခဲ့ပေမဲ့ အလွန်အမင်း ရက်စက်မှု။လူမဆန်မှုတွေကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့ ရလို့။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေ နဲ့ ဝေးဝေးနေ တတ်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာ ကိုယ်တိုင်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်လာခဲ့တော့ စာကြည့်တိုက်ရှေ့ ဟောပြောပွဲ တွေမှာ ရှေ့ဆုံးကအားပေးခဲ့ရတာ။ ဘတ်စကားတောင်မရှိတော့လို့ လှည်းတန်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းကနေ ပုဇွန်တောင်အထိ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာ " စစ်တပ်ဆိုတာ သေနတ်ကိုမိုးပေါ်ထောင်မပြစ်ဘူး။တည့်တည့်ပြစ်တယ် လို့ "နိုင်ငံတော် (ပြည်သူပိုင် ) မြန်မာ့အသံကနေ ခေါင်းပေါင်းစ တစ်လူလူ နဲ့ အသက် ၇၀ နီးပါး ခန့်ရှိတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ပြောသွားခဲ့တာကို ကျွန်မ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် အံသြစွာကြားခဲ့ရတာပါ။ ဒီစကားကို ဘယ်သူပြောခဲ့ ပါသလဲ။ ( ပြည်သူတွေမေ့များနေတယ် ထင်ပါသလား လို့တော့ ဂျာနယ် ဆရာများ ကိုမေးချင်မိပါတယ်။ ) မိန်းမတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ယူပြီး ။- ——- ကြားထဲမှာဘဲ ခေါင်းထောင်နေတဲ့သူ။ ဆွဒ်ဇလန် ဘဏ်မှာငွေသားပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဇိမ်အပြည့်ခံ။ ပြည်သူကို သမ၀ါယမ စနစ် နဲ့ တန်းစီတိုးခိုင်းတဲ့သူ။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးအမွေတွေ။ သူ့နဲ့ တကွ သူ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ။ဆက်လက် အသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ အမွေဆိုးတွေကို သတင်းစာ ဂျာနယ်သမားတွေ ဂျာနယ်သက်တမ်းနု သေးလို့ မသိတာလား။
ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ မျက်ရည်တွေကို ပြက်ရယ်ပြုတာလား။ လစ်လျုရှု မှေးမှိန်းအောင် လုပ်တာလား။ ကျွန်မ ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲ။
(၁)။7 Days Journal က အတွင်းမျက်နှာစာ ထဲမှာ မဆလစနစ်ဆိုးရဲ့ တရားခံ အကြီးစား ခေါင်းပေါင်းစ တစ်လူလူနဲ့ ဓာတ်ပုံနောက်ခံပုံကြီးထားလို့။ သူတို့မျိုးဆက် ကအကောင်းစားဆိုဖာတွေမှာ အခန့်သားဟန်ပါပါ နဲ့ ထိုင်ပြီး အင်တာဗျုးခံနေတဲ့ပုံကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြတာ ။
(၂)။ Flower News Journal/ Vol-8 .No.3. January 17 ထုတ်မှာ ပါတဲ့ အလွန်ဆိုးဝါးသော စာသား ကောက်နှုတ်ချက် " ဗခက ဟောင်း—- အပါအ၀င် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသည့်သူများ— လွတ်မြောက်။ ဆိုတဲ့ စာသားကို ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲ။
(၃)။ Hot News Journal / January 19, 2012 နေ့စွဲထုတ် ဂျာနယ် ၏ အဆိုးဝါးဆုံး မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံဖေါ်ပြမှု။ နှင့် ပြည်သူ့အတွက် အတိုက်အခံလုပ်ပေးနေတာပါလို့ မိမိကိုယ်မိမိ ကင်ပွန်းတပ်ထားသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ၏ သမီးတော် ဂျာနယ်တိုက် ပိုင်ရှင် အထက်တန်းစားလူ့အခွင့်ထူးခံခဲ့ရဘူးသူ သင်းကွဲသာကူးက ပြည်သူကပေးတဲ့လစာ နဲ့ တွက်ရင် တစ်လစာ မကတဲ့ ဆိုဖာကုလားထိုင် အကောင်းစားကြီး နဲ့ အပျံစား ဧည့်ခန်းမကြီး ထဲမှာ အခန့်သား စတိုင်အပြည့်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ( စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တစ်ဦး ) ကို ကြမ်းပြင်အောက် ကျုံ့ကျုံ့ လေး ထိုင်ပြီး ( သူတို့ခေတ်က သုံးနှုန်းတဲ့ စကား နဲ့ဆိုရင် ) ဂါရ၀ပြု နေတဲ့ ( ပြည်သူ့ အသံတွေကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်တင်ပြနေပါတယ်လို့ဆိုနေသူ သင်းကွဲဂျာနယ်လစ်ဇင်) မြင်တွေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ ပုံတွေဟာ ပြည်သူ့ မျက်ရည်ကို ခြေနဲ့ ဆေး သလို ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်မရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာ တွေဟာ လိုရင်သာလိုနေမယ်။ ပိုတယ်များ ရှိသလား။ လောကပါလစောင့်နတ်မင်း နဲ့ တကွ သိကြားမင်းကို တိုင်တည်ပြီး။မဟာပထ၀ီမြေကြီး ကို သက်သေအမှုပြု ပါတယ်။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ မဆလစနစ်ဆိုး ကြီး နှင့်၎င်းစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ကြသည့် သူများ။(၁၉၆၂-၁၉၈၈)၊ စစ်အစိုးရ နှင့် န၀တ စစ်အစိုးရ စနစ်ကြီးကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့ကြသည့်သူများ ( ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ) ။ ၎င်းတို့၏ အဆွယ်အပါးအနွယ်ဝင်များအားလုံးဟာ ကျွန်မတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး နှင့် မှီတင်းနေထိုင်ကြ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကို ကမ္ဘာအလည် မှာ မျက်နှာမွဲ ဖြစ်ရလေအောင် ၊အနှိမ်ခံရ လေအောင်၊ပြုလုပ်ခဲ့ကြသူများ၊သမိုင်းတရားခံများ။ ရာဇ၀တ်ကောင်များဘဲ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကို ပြည်သူ့မျက်ရည် ကိုမှင်လုပ်ပြီး။ခံပြင်းလှတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားတွေကို ကျွန်မ ထုတ်ဖေါ်ရေးသားပါတယ်။
သမိုင်းတရားခံ တွေ၊မဆလတွေ။စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် နဲ့ အနွယ်ဝင်တွေ မမောက်မာ ခဲ့ပါဘူး။မရက်စက်ခဲ့ပါဘူး။ မတရားတာ မစားခဲ့ပါဘူး။ ပြည်သူ့ ပိုင်ပစ္စည်းကို အာဏာ နဲ့ အပိုင် မသိမ်းခဲ့ပါဘူး။ မိမိနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်။ စီးနေတဲ့ ကား။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာ။ နိုင်ငံတော် ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာက ပေးတဲ့လစာ ငွေ နဲ့ ချစ်ခြုပ်ပြီးဝယ်ထားတဲ့ကားပါ။ အိမ်ပါ။ ချွေးနည်းစာတွေပါလို့ ပြည်သူတွေမျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး။ ရဲရဲရင်ဆိုင်ပြောရဲပါသလား။ တိုင်းပြည်ကို မရောင်းစားခဲ့ပါဘူး။မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ။ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကတော့ မပါပါဘူး လို့ ဘယ်သူငြင်းရဲမလဲ။ငြင်းပါ။
မငြင်းခင်မှာတော့ အမိမြန်မာပြည်က မြေကြီး ကိုလက်ထဲမှာ ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး မှ မဟုတ်မမှန်တာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခဲ့ ရင် အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုပါစေ၊မြေမြိုပါစေ လို့ သစ္စာ ဆိုပြီးမှငြင်းချက်ထုတ်ပါ။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အားလုံးကိုယ်စားပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျွန်မ မေးခွန်းတွေမေးချင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အသံကိုလေးစားတယ်။ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်နေပါတယ်။ လို့ အသံကောင်းဟစ် နေကြသော ဂျာနယ် များရှင့် -
မိမိ တို့ရပ်တည် နေတဲ့ stand မှန်ကန်ပါသလား။ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်း မှန်ကန်ပါသလား။ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ပြည်သူ့အသံကို မလေးစားချင်နေပါ။ပြည်သူ့ ဘက်က မရပ်တည်ချင်နေပါ။ ပြည်သူကို မစော်ကားမိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့ တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ် တွေကို သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကိုလိမ်ညာပြီး သင်းကွဲတွေကို သူရဲကောင်းဟန် နဲ့ ဂေါပကလို။ တရားရှင် လိုလို ပွဲမထုတ်မိပါစေ နဲ့လိုတော့ အမှန်တရား ကိုရဲဝင့်စွာ ပြောဆိုရေးသားပါတယ်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်နေရဆဲ။ကြိုးစားရယူနေရဆဲ ဖြစ်တဲ့သတင်းဂျာနယ်လစ်များ။ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာများ။ ဂျာနယ်များ ။ ကျွန်မရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာ တွေကို လူကြီးမင်းတို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြရဲပါသလား။
နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွေ မှာ ၁၉၈၉ ကထဲ က မမြင်ချင်မှ အဆုံး မြင်ခဲ့တွဲ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီလူ နဲ့ မိသားစု ၀င်တွေရဲ့ မျက်နှာကို ပြည်သူ့ဘက်တော်သားလို့ကြွေးကြော် နေတဲ့ ဂျာနယ် တွေ မှာလဲ ထပ်တွေ့ထပ်မြင်နေရဦးမယ် ဆိုရင်တော့ အော်ဂလီဆန်ပါတယ် ဂျာနယ်ဆရာတွေရယ်။ ပြည်သူ့ မျက်ရည်ကို မသုတ်ပေးချင်နေကြပါ။ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့။ ဆရာတို့ရေ။
သင်းကွဲ တွေကို တရားရှင်လိုလို။သူတော်ကောင်း လိုလို။ ပွဲ ထုတ်တာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို အလွန်လက်ခံပါတယ်။လေးစားပါတယ်။ လူသားတိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိ ရမယ်။ လူသားတိုင်း လွတ်မြောက်မှု ကို လိုလားတယ်။ လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိရမယ်။ ဒါတွေကို လက်ခံပါတယ်။
သင်းကွဲတွေ။သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ခြင်းအပေါ်မှာ မနာလိုစရာ မရှိသလို။ ဘာခံစားချက်မှတစ်စုံတစ်ရာ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ မရှိတာတော့ အမှန်ဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အမွှန်းမတင်သင့်တဲ့ သူတွေကို ချီးတန်ဆာဆင်ပြီး အမွှန်းတင်တာ ဟာ ပြည်သူ့မျက်ရည်ကို လှောင်ပြောင်တာဘဲ။ စော်ကားတာဘဲ လို့ တော့ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ မြင်တယ်။
လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပြောဆိုလုပ်ပိုင်ရေးသားခွင့်တွေ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက စလို့ တိုင်းပြည်ခေါင်း ဆောင် မည်သူကို မဆို အဘက်ဘက်က မျက်နှာမလိုက် ဘက်မလိုက်ဘဲပြောဆို ဝေဖန်ထောက်ပြရဲရမယ်။ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖေါ် ပြသရဲရမယ်။
နောင်လာနောင်သား မျိုးဆက်သစ် တွေကို လိမ်ညာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း အမှားတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ဆက်ညာပြီးအဆိပ်ပင်ရေလောင်းနေမယ်ဆိုရင် —– တိုင်းပြည်တာဝန် ကျေပြွန်တဲ့ ပြည့်သူ့ အသံကိုလေးစားသော၊ပြည်သူ့ ကို ကိုယ်စားပြုသော ဂျာနယ် တွေပါ လို့ မိမိ တို့ကိုယ် မိမိ တို့ ပြောရဲပါသလား။
( စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ဟောင်း နှင့်မိသားစုဝင်တွေ။မဆလ စနစ်ဆိုးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဆွေးတော်မျိုးတော် အနွယ်ဝင်တွေဟာ )) အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားခြင်း အတူတူ ပခုံးချင်း သွားယှဉ်မိလို့ အကျဉ်းချခံရတာလား။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံရတာလား ။ သူတို့တွေဟာ သင်းကွဲ တွေ မဟုတ်ဘူးလား ဆိုတာကို သဲကွဲစွာ မတင်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့။
ချော်လဲရောထိုင်။ကျားသေကို မသိမသာ အသက်သွင်း ။ရပ်တည်ချက်မမှန်သော သင်းကွဲ သာကူး လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ ပြောင်ပြောင်ထင်ထင် အရေခြုံထွက်ကပြတဲ့ ပြည်သူမျက်ရည်ကို ခြေဆေးနေသော ဂျာနယ် များလို့ဘဲ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း မထောက်ခံပါ။ မဝေဖန်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးကိုလည်း မထောက်ခံပါ။မဝေဖန်ပါ။ စနစ်ဆိုးခေတ်ဆိုးကြီး များကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသူ သမိုင်းတရားခံ များအားလုံး။အခွင့်အထူးခံလူတန်းစားများ အားလုံးကို အလွန်ရွံ့ရှာ မုန်း တီး နာကျည်းသော ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့ ဘက်တော်သား အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးလေးစားသူ ပြည်သူ တစ်ယောက်ပါ။